Wariyaasha Galkacyo oo shaaca ka qaaday cida dhaawacday Wariye xoriye | KEYDMEDIA ONLINE
Wariyaasha Galkacyo oo shaaca ka qaaday cida dhaawacday Wariye xoriye
GALKACYO(KEYDMEDIA) Suxufiyiin ka howl gala magaalada Galkacyo ee xarunta Gobalka Mudug ayaa u sheegay keydmedia in Xoriya C.qaadir oo aheyd tafaftiraha Radio Galkacyo iyo wakiilka Idaacada Risaala ee Galkacyo dhawaceeda in ay abaabuleen maleeshiya faroole ka amar qaadata.
Tafaftiraha Idaacada Risaala ee Muqdisho oo ay xoriya la shaqeyneysay ayaa u sheegay CPJ in mudooyinkanba Gabdhao ay ka cabaneysay Telfoono hanjabaad ah oo soo gaaray xili ay ku howlaneed ka xog waranka dagaalada u dhaxeeya maamulka mayalka adag ee Faroole iyo wadaad diimeedka xiriirka la leh Shabaab ee Atam.
Wariyaasha mudug waxa ay sheegeen in ay aad uga cabsi qabaan weeraro kale in loo geesto naftooda iyagoona codsaday badbaado iyo in lagalahadlo maleeshiyada Faroole si ay howshooda u sii wataan.
Saxafiyada la dhaawacay ayaa aheyd tafaftiraha Idaacada Galkacyo, waana gabadha kaliya ee jagada tafaftire ka qabat warbaahinta afka Soomaaliga ku hadasha,iyadoona noqoneysa saxafiyadii labaad ee ay maleeshiya weerar ay ku qaado.
Muda hada laga joogo in ka badan 5 sano ayaa kooxa hubeysan wadada u dhaxeysa Muqdisho iyo Afgooye waxa ay ku toogteen wariye Duniya Muxudiin Nuur oo ka tirsaneed Idaacada Horn afric taasoo aheyd Barnaamij soo saare qalbiyada dhageestayaasha si weyn u dagtay oo xusuus reebtay.